Somaliland: Wasiirka Hawlaha Guud oo Boorame u Tegay Qiimaynta Dhul Laga Dhisayo Maktabad - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Hawlaha Guud oo Boorame u Tegay Qiimaynta Dhul Laga Dhisayo...
Wasiirka wasaaradda hawlaha guud, guryaynta iyo gadiidka Somaliland Cali Xasan Maxamed (Cali-mareexaan), oo safar shaqo ku jooga magaaladda Boorama ayaa maanta soo kormeeray meelo dhawr ah oo la doonayo in laga dhiso xarunta wax-akhriska ee Boorama Library.
Wasiirka oo uu socdaalkiisa ku wehelinayay guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Geelle Cadar, ayaa markii ay kormeerka samaynayeen waxaa sidoo kale la socday badhasaabka gobolka, maayarka degmadda Boorama, gudoomiyaha jaamacadda Camuud, ururka dhalinayaradda ee ku hawlan dhismaha xaruntaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal.
Wasiirka hawlaha guud, waxa uu kormeer ku soo maray goobo dhawr ah, kuwaasi oo ka mid ah meelaha la doonayo in laga dhiso xarunta wax-akhriska ee magaaladda Boorama. Waxaana kormeerkaasi kadib warabaahinta kula hadlay hudheelka Rays ee magaaladda Boorama wasiirka hawlaha guud, badhasaabka gobolka iyo guddoomiyaha jaamacadda Camuud.
Wasiirka Hawlaha Guud Mudane Cali Mareexaan
Wasiir Cali Mareexaan, oo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Waxaan u nimid in aan soo indho-indhayno meesha la doonayo in laga dhiso xaruna wax-akhriska (Library) Boorama. Waxaanan ku dedaalaynaa sidii ay Boorama u heli lahayd xarun wax-akhris oo casri ah (Library), oo dadka faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxay iyo dhalinyarada wx baranaysaa ay wax ku akhristaan. Anagoo taa ka duulayna ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu qorsheeyay oo uu anaga-na nagu soo diray, anigoo madaxweynaha ka wakiil ah in loo hello dhulkii laga dhisi lahaa xarunta wax-akhriska Boorama (Borama Puplic Library)”.
Waxaanu intaasi ku daray “Kadib-na marka dhulkii la sateeyo, in si wada jir ah loogu wareejiyo dhalinyaradan. Taasi-na si fiican ayaanu isula qaadanay madaxda gobolka, madaxda tacliinta, madaxda heer degmo iyo dhalinyaradda ku hawlan dhismaha xarunta wax-akhriska iyo odayaasha degaanka.
Laba ilaa saddex meelood ayaanu ka fikiraynay in laga dhiso, ta ay doontaba ha noqotee, iyadoo si dhakhso ah loo dhagax dhigi doono, dhalinyaradana loogu wareejin doono, isla markaana si dhakhso ah loo bilaabi doono dhismaha”ayuu yidhi wasiirka hawlaha guud.
Geesta kale badhasaabka gobolka Awdal Mustafe Cabdi Ciise (Mustafe-shiine), oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in xukuumadu ay si weyn isaga xil saartay sidii loo heli lahaa goob ay wax ku akhristaan bulshadda reer Boorama.
Waxaanu yidhi “Wasiirku wuxuu halkan (Boorama) u yimid oo uu u socdaa hawl muhiim u ah qaranka Somaliland oo dhan, gaar ahaan gobolka Awdal, oo ah in la helo qorshe ay in badan dhalinyarada gobolkani ku riyoonaysay, khaasatan Adco Academy ay in badan waday oo ay daba socotay, taasi oo ah in la helo xarunta wax-akhriska bulshadda (Puplic Library), maktabad bulshadu wax ku wada akhrisato. Arrintaasi oo xukuumadu si weyn uga hawl-gashay madaxweynaha iyo wasiirkuba.”
Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Camuud Prof. Saleebaan Axmed Guuleed, waxaanu xukuumadda, madaxweynaha iyo wasiirka hawlaha guud uga mahad celiyay sida qaarinta leh ee ay isaga xil saareen dhismaha xarunta wax-akhriska ee la doonayo in laga hirgeliyo magaaladda Boorama.
“Xukuumadda, wasiirka ilaa madaxweynaha waxaanu uga mahad celinaynaa, dareenka ah in ay si buuxda masuuliyad qaran u arkaan, oo weliba hawl-galkeedana ay hormood ka noqdaan, anaguna waan ku taageersanahay, waanan la qabanaynaa, waanan fulinaynaa”ayuu yidhi gudoomiyaha jaamacadda Camuud
Somaliland: Mashruucii Biyo Ballaadhinta Caasimadda Hargaysa Oo Gabi Ahaanba Istaagay, Khilaafka Sherkadaha Gacanta Ku Haya Iyo Doorkii Xukuumadda Oo Meesha Ka Baxay.